Truth be known: March 2007
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၄၅နှစ်ကာလက ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးအကြောင်း တစိတ်တပိုင်း။ ထုံးစံအတိုင်း ( ) ထဲက ကျနော်လက်ဆော့ထားတာတွေတော့ သည်းခံဖတ်ပေါ့နော်။
မတ်လ (၇)ရက်နေ့စွဲပါ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်မှာ…
တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်သို့ ချီတက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်သို့ ချီတက်ရာတွင် ပ-ထ-စ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ၊ ပ-မ-ည-တ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများဖြင့် ညီညွတ်စွာ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသည် မတိကျဘဲ လိုသလို ဆွဲယူနိုင်သဖြင့် အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း။ (၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေတို့တွင် အားနည်းချက်များရှိကြောင်း။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝတ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရန် အမျိုးသားညီလာခံကြီးကို ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အရွေးကောက်ခံ အမတ်များနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း။….)
အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရာတွင် ပါတီကြီး (၃)ပါတီနှင့် ညှိုနှိုင်းရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်၍ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရန် ပါတီကြီး (၃)ပါတီကလည်း အချက်အလက်များကို စဉ်းစားထားကြစေလိုကြောင်းဖြင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက မတ်လ (၂၄)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ဒဂုံရိပ်သာ၌ (ပ-ထ-စ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ၊ ပ-မ-ည-တ) နိုင်ငံရေး (၃)ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များအား ဘိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးရာတွင် ပြောကြားလိုက်သည်ဟု ထပ်မံသိရှိရ၏။ (စဉ်းစားခိုင်းယုံပါ။ စဉ်းစားတာတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာ မပါပါဘူး။)
လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ကွဲပြားနေခြင်းမှာ မလိုလားအပ်ကြောင်း ပြာကြားလိုက်သည် ဆို၏။ (ကဲ…အဲဒီတည်းက သိဖို့ကောင်းတယ် သူလေး ရေလာမြောင်းပေး လုပ်နေပြီဆိုတာကို)
ဖမ်းဆီးထားသော (ပထစအစိုးရအဖွဲ့ဝင်) များနှင့် ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များအား တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရနှင့် လက်တွဲ၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း။ လက်တွဲ မဆောင်ရွက်လိုသူများအား ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လည်း ပြောပြသည်ဆို၏။ (ဆွေးနွေးနေပါတယ် ခေါင်းညိတ်ပါ။ ခေါင်းမညိတ်ရင် လက်ထိတ်ပါ။)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ် အချိန်ကကဲ့သို့ပင် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဖြင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံဆွေးနွေးသည်ဟု သိရှိရလေသည်။
နောင်ကိုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သင့်လျော်သလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ပြောပြလိုက်သေးသည်ဆို၏။ (သင့်လျော်မှ ဆွေးနွေးမှာ။ မသင့်လျော်တော့ မဆွေးနွေးဘူးပေါ့)
၁၉၆၂ ခုနှစ်ထုတ် ဒေါင်းစကြာလုလင်၏ ဗမာပြည်ဟောကိန်းနှင့် မော်ကွန်းဝင်မှတ်တမ်း (စာမျက်နှာ ၁၄၁-၁၄၅) မှ တိုက်ရိုက် ကူးချသည်။ ၁၇-၅-၆၂ နေ့တွင် စက်တင်ပုံနှိပ်၍ မောင်စိန်ညွန့် မန်းသူရိယက တာဝန်ခံ ထုတ်ဝေသည်။
Posted by generation96 at 11:29 PM2comments
မိမိရရကော်ဆဲ၊ စိတ်ဆာတာနဲ့ အတော်ဘဲ။
ရင်ထဲ ဒါမှ ရှင်းလေသတည်း။
(၂၄-၁-၆၉ မှ ၂၅-၂-၇၃)
ဦးတင်မိုးရဲ့ ပုဂံကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ ကဗျာစာအုပ်မှပါပဲ။ ကျနော်တို့ရော ဘော်လုံးပွဲတွေမှာ ဘာကြောင့် ဆဲကြသလဲ။
မှတ်မှတ်ရရပေါ့။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်အချိန်က သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာ မီးကုန်ယမ်းကုန် အင်တိုက်အားတိုက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ စိတ်ပါလက်ပါ ဆဲခဲ့ဖူးတယ်။ ဘ၀မှာ ကြည့်ဖူးတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေထဲမှာ အဲဒီပွဲဟာ ရင်ခုန်စရာ အကောင်းဆုံး၊ ဒေါကန်စရာ အကောင်းဆုံး၊ ပျော်စရာ အကောင်းဆုံး။ ကြည့်ဖူးရင်မှတ်မိလိမ့်မယ်။ “ဘဏ္ဏာအခွန်နဲ့ ကာကွယ်ရေး” နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ။
ပွဲကြည့်စင်တိုင်းရဲ့ အပေါ်တ၀က်ကို အစိမ်းရင့်ရောင် ၀တ်စုံတွေ ပွဲမစခင် နာရီပေါင်းများစွာထဲက နေရာယူထားခဲ့ကြတာပေါ့။ အထက်စီးကနေ ရေဘူးတွေ၊ ပြောင်းဖူးရိုးတွေ၊ ရံဖန်ရံခါ သေးထုပ်တွေ အောက်က ပရိတ်သတ်ပေါ် ကျရောက်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အောက်က အပေါ်ကို တုံ့ပြန်ပြီဆိုရင် လုံခြုံရေးတွေ ရောက်လာတတ်တာပ။ ဒီလိုကို ပေါ်တင်အနိုင်ကျင့် ခံခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူတွေနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲဟာ ဘဏ္ဏာအခွန်နဲ့ ကာကွယ်ရေး ဘောလုံးပွဲမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ လူထုနဲ့ စစ်တပ် ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပွဲအပြီး ကျနော်တို့တွေ၊ ပြည်သူတွေ အောင်ပွဲခံခဲ့ပုံတွေ ခုထိမြင်ယောင်နေတုန်းပဲ။ သုဝဏ္ဏကွင်းထဲက ပြိုဆင်းလာတဲ့ လူအုပ်၊ ကွင်းပြင်က ၀င်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက် မျက်လုံးတွေနဲ့ ရင်ခုန်တဲ့အမေး။ ကျနော်တို့ လမ်းပေါ်မှာ ကခဲ့ကြတယ်။ မီးပွိုင့်တွေမှာ ကားတွေက မေး၊ ကျနော်တို့က ဖြေ “ဘဏ္ဏာအခွန်၊ ဘဏ္ဏာအခွန်”။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၊ ဟွန်းတွေတီးကြ။ ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလား အောင်ပွဲခံတာ ပျင်းတယ်။ ဂျာမနီ ယူရိုအောင်ပွဲခံတာ ပျင်းတယ်။ ယူအေအီး အာရှဖလားအောင်ပွဲခံတာ ပျင်းတယ်။ ဒါအောင်ပွဲ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အောင်ပွဲ။
Posted by generation96 at 10:12 AM2comments
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ဘုန်းကြီးဝတ်ခွင့် မရလို့ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကိုထင်ကျော်ရဲ့ပုံတွေပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ သူများကို မသိပေမယ့် ကျေးဇူးပါ။ ဒါမျိုးဆိုတာ သမိုင်းမှာ မြင်ရခဲတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုထင်ကျော်အပါအ၀င် ၆ယောက်ကို ဘုန်းကြီးပေးမ၀တ်တဲ့သတင်းပါ။ ဂျာနယ်ဖတ်သူတိုင်း တွေ့ကြရမယ့်ဟာလေးပေါ့။
ဆန္ဒပြဖူးလို့ ဘုန်းကြီးပေးမ၀တ်ဘူးတဲ့။ ဗုဒ္ဓေါ..ဒီလိုသာဆို ဗမာနိုင်ငံကြီးတော့ ရဟန်းရှားပါးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာပဲ။ ခက်ခက်ချေသေး။ ဆန္ဒပြတဲ့ပြစ်မှုကြောင့် ဘုန်းကြီးမ၀တ်ရရင် ခိုးဖူး၊ ၀ှက်ဖူး၊ သတ်ဖူးတဲ့ လူတွေလည်း ဘုန်းကြီး ပေးမလုပ်သင့်ပေဘူးပေါ့။ ကိုင်း…သွားကြပေတော့ ငရဲကို။ (ဗမာပြည်စစ်တပ်ကြီးတော့ ဒီအတိုင်းဆို ကုသိုလ်ရစရာ မမြင်)
တော်သေးတာပေါ့ ဂေါတမခေတ်တုန်းက ဒီလို အစိုးရမဟုတ်ပေလို့။ နို့မို့လို့ကတော့ အင်္ဂုလိမာလတယောက် ရဟန်းဘ၀ ရောက်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။ ဂေါတမလည်း အင်္ဂုလိမာလကို ရဟန်းပြုခါနီးကျမှ ရဲစခန်းသွား ထောက်ခံချက်တောင်းနေရအုံးမယ်။
(တော်လောက်ပြီ။ တော်ကြာငရဲမင်း မျက်စိစားပါးမွှေးစူးနေအုံးမယ်။)
Posted by generation96 at 9:41 AM2comments
Major General Aung San pledges
to fight for country
H. E. Major General Aung San, War Minister, speaking on behalf of the Army at the send-off ceremony on Saturday, pledged the country till final victory is won. He disclosed that he himself was departing with the soldiers to frontlines, and that he would share whatever hardships they would meet. He said “Our army will fight for the benefit to the country, and, if needs be, we will offer ourselves as the very bulwarks against the attacks of the enemy. We will fight the enemy with all the strength in our possession. Unless we can drive the enemy away from our country, and unless we can beat him decisively, our freedom will always be in jeopardy. Let us therefore advance so that the prosperity of our children will be secured.”
Rangoon-Tuesday-March 20, 1945.
Posted by generation96 at 10:21 AM0comments
ဒီနေ့ ဗမာပြည်ရဲ့ ၆၂ ကြိမ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ပါ။ သြော်…ဘာလိုလိုနဲ့ တတိုင်းတပြည်လုံး အုံးအုံးကြွက်ကြွက် စိတ်တူကိုယ်တူ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲခဲ့တာ ၆၂ နှစ်ကြီးများတောင် ရှိခဲ့ပေါ့။ အတိအကျပြောရရင် ဖက်ဆစ်ကို တော်လှန်သော တော်လှန်ရေးနေ့ပေါ့။
တပ်မတော်နေ့လို့ ရုပ်တည်နဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တဦးချင်းရဲ့အမြင်အရ တပ်မတော်နေ့ဆိုတာ တပ်မတော်ကြီးကို စတင်ထူထောင်တဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တပ်မတော်နေ့လို့ ရုံးပိတ်ရက်ကလေး ထပ်တိုးချင်ရင် (သင်္ကြန်တောင် ၁၀ရက်ပိတ်သေးတာ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ယိုးဒယားနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မှာ လက်မောင်းသွေးဖောက် သစ္စာရေသောက်ပြီး ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကြီးကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ကိုသာ သတ်မှတ်သင့်ပါကြောင်း။ (တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်….ဒီလက်မောင်းသွေးဖောက် သောက်ကြတဲ့ အထဲမှာ ဗိုလ်နေ၀င်း မပါပါဘူးခင်ဗျာ။ သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီအကြောင်း ထည့်မသင်ပါဘူး။ မှတ်လော့)
ဒါကြောင့် ယနေ့သည် တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်၏။ တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်၏။ တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်၏။
Posted by generation96 at 8:58 AM0comments
“နှမတော်…ဘုရင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဂဏ(ပြည်သူ့)အုပ်ချုပ်ရေးဟာ ဒီနေရာမှာ အခြေခံပီး ခြားနားကြတာပဲ။ ဂဏတန္တရဟာ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ယန္တယားဟာ အာဏာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အပေါ်မှာ အခြေမခံဘဲ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားပေါ်မှာပဲ အခြေခံတယ်။ ဂဏတန္တရဟာ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးဖို့ မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူတွေအားလုံး ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ မျှမျှတတဖြစ်အောင် စီမံပေးဘို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရာဇတန္တရကတော့ ဘုရင်ကြီး ဘုရင်ငယ်တွေရဲ့ အခွင့်အာဏာအတွက်ဖြစ်တယ်။ …………………………………………………………………………………………………………
အဲဒီမှာ ဗြဟ္မဏတွေရှိတယ်။ ၀သျှတွေရှိတယ်။ သုန္တရတွေရှိတယ်။ သူတို့ဟာ တမျိုးနဲ့တမျိုး အဆင့်အတန်း ခွဲခြားပီး မသင့်ကြဘူး။ ဒီလို မသင့်မတင့် ဖြစ်နေခြင်းအားဖြင့် ဘုရင်တွေအဖို့ သူတို့လိုသလို ကျင့်သုံးနိုင်ဘို့အတွက် အထောက်အပံ့တွေဘဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂဏအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှာတော့ အဲဒီလို သွေးကွဲမှုတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတား အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။…………………………………”
စာမျက်နှာ ၁၉၃၊ တက္ကသိုလ် တင်ထွန်းအောင်ရေး“ဝေသာလီမြို့က ပြည့်တန်ဆာ”
သီဟ သူ့ဇနီးကို ပြောပြနေတာတွေပါ။ စာကို အကုန်ကူးရင် များလွန်းလို့ ဖတ်စေချင်တာလေးတွေပဲ ကူးထားပါတယ်။ (……….)တွေက မကူးထားတဲ့နေရာတွေပေါ့။
နည်းနည်းနားလည်အောင် ပြောရရင် သီဟက ဝေသာလီသားပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဂေါတမ သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်က ဝေသာလီ၊ ရာဇဂြိုလ်၊ ကောသလ၊ သာဝတ္တိ၊ ဂန္တာရ စတဲ့မြို့နိုင်ငံတွေပေါ်မှာ မူတည်ရေးထားတာပါ။ အဲဒီကာလတုန်းက ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး(ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေပေါ့လေ)နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဘုရင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုပြီး ကွဲနေတဲ့ အထဲမှာ ဝေသာလီရဲ့ ဂဏအုပ်ချုပ်ရေးဟာ သိပ်ကို နာမည်ထွက်ခဲ့တာပါ။ ဝေသာလီဟာ သိပ်ချမ်းသာ ခဲ့တာပေါ့။ ဗုဒ္ဓသမိုင်းတွေ ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်မှာမှ ဝေသာလီအကြောင်းပါတာ မဟုတ်ပါ။
ထားတော့။ သီဟရဲ့ အပြောလေးတွေကိုဖတ်ပါ။ ၂၁ရာစု ဗမာနိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်စဉ်းစားပါ။ အဖြေတခုခုထွက်လာရင်၊ ဒါမှမဟုတ် စဉ်းစားစရာ တခုခုထွက်လာရင် ကျနော် ကျေနပ်ပြီ။
“……ဒီဆင်းရဲမှုတွေ မမျှတမှုတွေရဲ့တာဝန်ဟာ ဘယ်သူ့ပေါ်မှာရှိမလဲ မောင်တော်”
ရောဟဏီက သီဟကို မေးလိုက်သည်။ သီဟကရယ်၍ ဇနီးဖြစ်သူကို ကြည့်လိုက်သည်။
“ဘုရင်တွေ မင်းကြီး မင်းငယ်တွေမှာ ရှိတာပေါ့။…………..”
“ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘုရင်စနစ်ဟာ ဘုရင်လုပ်သူရဲ့ အာဏာအခွင့်အရေးသာ ပဓာနဖြစ်လို့ပဲ။ သူဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာ အကြွယ်ဝဆုံးနဲ့ အလွတ်လပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ သူဟာ ဘာမှ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာ တနေ့တခြားတိုးပွားနေတယ်။ သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်တွေ သုန္ဒရတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပစ္စည်းဟာ သူပိုင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် မှန်သမျှတို့ရဲ့ အရှင်သခင်ပဲဖြစ်တယ်။ သူဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ သမီးကညာတွေကို သူ့ရဲ့ ဆန္ဒရမက်အတွက် သူ့နန်းတော်တွေထဲမှာ ထားနိုင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ သားလုလင်တွေကိုတော့ သူ့ရဲ့ထီးနန်းစည်းစိမ် နိုင်ငံတော် ချဲ့ထွင်ဘို့အတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်စေခိုင်းတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလဲ သူ့ရဲ့ ထီးနန်းအဆောင်တော်တွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုရတယ်”
“ဟင်…လူတွေက ဒါတွေကို ခေါင်းငုံ့နေကြတာဘဲလား..”
“ဒါကတော့ အုပ်စိုးသူတွေဟာ လက်နက်၊ အာဏာနဲ့ အဓမ္မ ဖိနှိပ်လာခဲ့တာ အနေကြာလာတော့ အစဉ်အလာလို ဖြစ်ပြီး အကျင့်ဖြစ်သွားတော့လဲ ခံနေကြတာဘဲ။ …….”
စာမျက်နှာ ၁၉၁-၁၉၂။ တက္ကသိုလ်တင်ထွန်းအောင်ရေး “ဝေသာလီမြို့က ပြည့်တန်ဆာ” ပထမပိုင်း။ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်၊ ထုတ်ဝေသူ မမြင်ရတော့ပါ။
ကဲသိကြပလား ဘာကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ကြီးကြီးလုပ်၊ စိန်ကြီးကြီးပန်ပြီး အိမ်ကြီးကြီးတွေနဲ့ နေနိုင်တယ်ဆိုတာ(ဗိုက်ကြီးကြီးတော့ ဘာလို့လဲ မသိပေါ့လေ)။ ချမ်းသာတာ အပြစ်မပြောပါနဲ့။ ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက သီဟဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးတောင်သိသေးတာ။ ကျနော်တို့တွေလည်း သီဟ လောက်တော့ သိသင့်ပြီပေါ့။ ကိုသီဟပြောတဲ့ အကျင့်လေးတွေလည်း ဖျောက်သင့်ပြီပေါ့။……
ဖတ်ပြီးပြုံး၊ ပြုံးပြီးမဲ့၊ မဲ့ပြီး စိတ်ပျက်နိုင်ကြကုန်စေသောဝ်။
Posted by generation96 at 1:10 AM0comments
စင်ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်(NUS)က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပါ။
ပည့ာတန်ဆောင်က လက်ပံပျား ကျေးရွာမှာ စာကြည့်တိုက်ဆောက်ပြီးပါပြီ။ ရေတွင်းလည်း တူးပေးပြီးပါပြီ။ စာအုပ်တွေလည်းလှူ၊ ဆေးတွေလည်း လှူပြီးပါပြီ။ ၂၀၀၂ တည်းက ဗမာကျောင်းသားတယောက်စပြီး လုပ်ခဲ့တာကို နှစ်တိုင်းဆက်သွားနေခဲ့တာပါ။ အဲဒီကျောင်းသား တက္ကသိုလ်မှာ မရှိတော့ပေမယ့် NUS က စင်ကာပူကျောင်းသားတွေ ဆက်လုပ်နေဆဲပါ။ ဒီနှစ်လည်း ဇွန်လမှာထပ်သွားပြီး ကျောင်းအတွက် ပရိဘောဂတွေလှူမယ်ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ကျောင်းမှာ ပရိဘောဂမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ စင်ကာပူကလူတွေတော့ ဒီမှာ အလကားဝေတဲ့ Voices မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ပုံက အဲဒီရွာမှာ စင်ကာပူသား တရုတ်လေးတယောက် ကျောင်းသားလေးတွေကို ပစ္စည်းဝေနေတုန်း ရိုက်ထားတာပါ။ အသေးစိတ် သိလို ကူလိုရင် ppt_nus@yahoogroups.com ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
နတ်မိမယ် ၉ ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် ၀င်းကျန်(ဒါလည်း စာလုံးပေါင်း မသေချာပါ) ကျေးရွာကို သွားမှာပါ။ ဗမာကျောင်းသား ၂ယောက်ရယ် စင်ကာပူကျောင်းသား ၂၂ယောက်ရယ် သွားပါလိမ့်မယ်။ မေ ၉ ကနေ ၃၀ အထိနေပြီး ကျောင်းစိမ်း ၀တ်စုံတွေ၊ မူလတန်း ကျောင်းစာအုပ်တွေ၊ ကလေးပုံပြင်စာအုပ်တွေလှူပါမယ်။ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးမယ့်အပြင် ကျောင်းကဆရာမတွေကိုလည်း training ပေးမယ်ဆိုပါတယ် (အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာပေါ့)။ အခုတော့ ဒီခရီးအတွက် စတင်အလှူခံနေပါတယ်။ NUS ထဲမှာ နတ်မိမယ် ၉ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကားရေဆေးရင်း fund ရှာနေကြပါပြီ။ သူတို့ Blog ရှိပါတယ်။ သွားကြည့်ပါ။ ဗမာတွေစုရုံး စုရုံး လုပ်တဲ့ Peninsula Plaza မှာလည်း ဒဏ္ဏာရီက အလှူခံပေးနေပါတယ်။ ကျောင်းစိမ်းတွေ၊ ကလေးစာအုပ်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ တတ်အားသမျှ ကူညီကြပါလို့။
ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို လုပ်ပေးတဲ့လူရှိရင် လုပ်ပေးတဲ့လူကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီခြင်းဖြင့် လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြပါလို့။ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောလိုက်ကြပါဦး…..
Posted by generation96 at 9:43 AM 1 comments
March 16, 1998. Prome Road(Inya Lake),Rangoon, Burma.
Sound of yelling, cursing and shouting spread all over Prome Road and Inya Lake. Platoons of Stick wielding Riot Police were enjoying their day by beating, kicking, and even drowning the University students on strike.
Earlier hundreds of University students gathered and demanded justice from the ruling government for what happened on March 13 inside RIT compound. The demand to release all arrested RIT students were also raised. BSPP responded by sending troops of Riot Police to crush the strike.
The white staircase (တံတားဖြူ)leading upwards the Inya Lake was so stained with students’ blood that March 16 was later known in Burma as “Red Bridge Day” (တံတားနီ နေ့). It was rumored female students were molested while drowning inside Inya Lake and nearlyahundred were either beaten to death or drowned to death.
As far as I remember, the official version of the incident did not mention how much causality was there but they did admit 40 students were died of suffocation while transporting them to Insein prison. It was because the vehicle those 40 students were put in had little room for even about 20 people; it was not made for human transporting; the back of the vehicle carriesasealed container with no window. Until about2years ago, the vehicle was still running in North Oakkala.
It wasaday not to be forgotten, it wasaday our brothers and sisters loss their lives while trying to bring better future for us, it wasaday 1988 witnessed the first mass killing of innocent people by the authorities. And it is nowaday that reminds us the duty to make Burma better is now on us.
From here, I bow, for the fallen heroes!
Posted by generation96 at 8:43 AM 1 comments
“အမယ်လေး” ဘာများလဲလို့ ဖတ်နေတဲ့မျက်စိတွေ ချက်ချင်းခွာသွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ “ဟဲ့ဟဲ့…မဖတ်နဲ့၊ မဖတ်နဲ့” ဘေးက သူ့သူငယ်ချင်းကိုပါ တဆက်တည်းတားလိုက်တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းမက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ စာရွက်ကို ချက်ချင်းပြန်ချ။ “မဖတ်ဘူးနော်”တဲ့။
မနေ့က ကျနော်မြင်လိုက် ကြားလိုက်ရတဲ့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစုရဲ့ စာရိတ္တသပိတ် လှုံ့ဆော်စာအပေါ် တုန့်ပြန်မှုလေးပါ။ အနီးအနား မေးမြန်းကြည့်တော့ သူတို့တတွေ ဒီမှာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ လာတက်နေကြတာဆိုပဲ။ ရင်နာစရာပါ။ ကျနော်တို့တွေ သိပ်မြတ်နိုးတဲ့ကျောင်း၊ သမိုင်းအစင်အလာ ကြီးမားတဲ့ကျောင်း၊ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတွေမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်း။ ဒီကျောင်းက မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ရင်နှစ်သည်းခြာ နိုင်ငံ့အနာဂတ်တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မျက်လုံးတစုံကိုတောင် စစ်တပ်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ မဖွင့်ရဲဘူးဆိုတော့…….။
ကျနော် သိပ်ဝမ်းနည်းတယ်။ သိပ်စိတ်ပျက်တယ်။ သိပ်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ကျနော်တို့တတွေ ဒီလောက်တောင် ရှူံးသွားပြီလား။ ဒီလောက်ထိအောင် တကယ်ကို သွေးကြောင်ကုန်ပြီလား။ ကိုယ့်မျက်လုံးတောင် ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ဒီအနာဂတ်တွေရဲ့လက်ထဲ ဗမာပြည်ကြီးကို ထိုးအပ်လိုက်ရင်…… “တို့တာဝန်အရေးသုံးပါး၊ ပြည်သူ့သဘောထား” ဆိုပြီး “နိုင်ငံဦးဆောင်မှုဟာ တပ်မတော်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်” လို့ တညီတညွတ်တည်းဆိုကြမယ်ထင်တယ်။
“ရန်ကုန်မှာ အကိုရှိသေးတယ်။ သပိတ်မှောက်လိုက်ရင် သူဘယ်လိုလုပ်မလဲ”တဲ့(လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး အော်ခိုင်းနေလို့လားဗျာ)။
“ကျနော်က ဒါတွေနားမလည်ဘူး”တဲ့(ဗမာလို ရေးထားတာကြီးကိုလေ)။
Labels: Criticism, general
ဖတ်ကြည့်ပါ။ တွေးကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကျနော်တို့ တတွေ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ထိုင်နေကြမလား။
လုပ်နိုင်သလောက်လေး လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကူလုပ်ကြမလား။
ကိုယ်တယောက်တည်း လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြမလား။
ကိုယ်လိုလူတွေ တယောက်၊ တယောက်နဲ့ အများကြီးရှိရင်ဆိုပြီး လုပ်ကြမလား။
မကြိုက်ဘူး၊ မကောင်းဘူး တတွတ်တွတ်ရွတ်နေမယ့်အစား
ကြားဖူးကြမှာပါ…“တနေ့တလံ၊ ပုဂံ ဘယ်ရွေ့မလဲ”
ကျနော်ကတော့ ထိုင်ရာကထလို့ ခြေတလှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီ။
ဗမာပြည်မှာ သဲမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ပါစေ…အုတ်မိုးကြီး ရွာပါစေ….
Posted by generation96 at 9:23 AM0comments
Posted by generation96 at 10:28 AM0comments
သူ ဘာမှ အပူအပင်မရှိဘူး။
သူ့အမေ ဘယ်နားမှာလည်း မသိဘူး။
သူ့အနာဂတ် ဘယ်လိုရှိမလဲ မသိဘူး။
သူ့ကို ဘယ်သူမှလည်း အရေးမစိုက်နိုင်ဘူး။
သူဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။
သူဟာ ပလက်ဖောင်းဘေးက အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။
(Burmese American Democratic Alliance မှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲက အခံစားရဆုံးပုံကိုယူထားတာပါ။ ပုံတွေအားလုံးကို ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
Posted by generation96 at 9:25 AM 1 comments
အချိန်မရှိလို့ အသည်းအသန် အလျင်အမြန် ဦးတင်မိုးရဲ့ နောက်ကဗျာတပုဒ်တင်လိုက်ပါတယ်။ အရာရှိမင်းများ အတွက်ပါ။
ကျအောင် ကြိုက်အောင် ပြောတတ်၏။
Posted by generation96 at 10:25 AM0comments
ဆရာဦးတင်မိုး အမှတ်တရ သူ့ရဲ့“ပုဂံကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ” ကဗျာစာအုပ်ထဲက ကဗျာတပုဒ်ကို ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၇၇ ဇူလိုင်လမှာ တန်ဖိုး ၅ ကျပ်နဲ့ အမေ့ကျောင်းစာစဉ်က ထုတ်ဝေပြီး ပန်းပေါင်းတရာက ဖြန့်ပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးပန်းချီ ပေါ်ဦးသက်ပါ (နောက်မှ မျက်နှာဖုံးကို တင်ပေးပါအုံးမယ်)။
ခု မဟုတ်ပါ၊ မဟုတ်ပါပြီ
ချမ်းသာပေးပါ့၊ ပေးပါဗျ” ဟု
(၁၈-၁-၇၃ မှ ၇-၂-၇၃)
(၂၁ ရာစု ကျားအိုကြီးတွေ ဒီကဗျာကို နားလည်ပါ့မလားမသိ။ ၂၀ရာစု ကျားအိုကြီးတော့ သူ့ကိုရေးလို့ ရေးမှန်းမသိ ဆုံးရှာပြီ။ ခံစားနားလည်နိုင်ကြပါစေ။)
Posted by generation96 at 10:08 AM0comments
ကျနော် တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး စာမရေး ဖြစ်တာကြာပြီ။ သိပ်ကိုကြာပြီ။ တမျိုးသားလုံးကောင်းစားရေးအတွက် ဗမာပြည်မှာ၊ နိုင်ငံခြားမှာ လူပေါင်းမြောက်မြားစွာ စွန့်လွှတ်စွန့်စားပြီး လုပ်နေကြချိန်မှာ ကျနော်တယောက် ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ပညာရေး၊ ကြီးပွားရေးတွေ လုပ်လို့ ဗမာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဥပက္ခာပြုထားခဲ့တယ်။
ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေပြလည်း ကျနော်အားမပေးနိုင်။ လွတ်ပြန်တော့လည်း ၀မ်းသာမပေးနိုင်။ စင်ကာပူမှာ အခွန်ကိစ္စလုပ်ကြတော့လည်း အကူအညီမပေးနိုင်။ ဟိုတုန်းကလုပ်နိုင်တာတွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဒေါသဖြစ်တယ်။ လုပ်နေကြတဲ့ လူတွေကိုလည်း အားနာတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ရှက်လည်းရှက်ပါရဲ့။
တခုပဲဖြေသာပါတယ်။ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်၊ တိုင်းပြည်ကိုမချစ်၊ လူမျိုးလည်းမချစ်၊ နိုင်ငံခြားမှာနေ၊ မင်းတို့ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဗမာပြည်အရေးကို လုံးလုံးမကူညီ စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူတွေထက်တော့ သာပါသေးတယ်လို့။ ၈၈မှာ ချာတိတ်ကျနော် ဆန္ဒပြပွဲ ၀င်နွှဲခဲ့တယ်။ သေနတ်သံတွေကြားပုန်းရှောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၉၆ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါခဲ့တယ်။ လှံစွပ်တပ် သေနတ်တွေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ အရိုက်ခံ၊ အဖမ်းခံရဖူးတယ်။ ၉၈မှာ ချခဲ့ပြန်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်အဖမ်းခံရချိန်မှာ ညညအိမ်ရှေ့ ကားသံကြားရင် ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျနော့်အတွက် အတိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီ။ လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေ လုပ်နေကြချိန်မှာ ကျနော်ဘ၀ကို ပျော်မွေ့လို့ တကိုယ်ကောင်းဆန်နေတတ်ပြီ။
ဒီအပြစ်တွေအတွက် ကျနော် သိတာတွေ၊ ကျနော် ကြုံခဲ့တာတွေ၊ ညီငယ် ညီမငယ်တွေအတွက် ကျနော် ပြောပြမယ်။ ကျနော် လုပ်လို့ရသလောက် လုပ်ပေးနေဦးမယ်။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရဲတဲ့ သတ္တိတွေ ကျနော်ပြန်ရတဲ့ အချိန်အထိပေါ့။
Posted by generation96 at 1:29 PM 1 comments